Bixi Hal Guji: 4 Arrimood oo Suuqgeyn Mashiinka Raadinta Ah Oo Waxyeello Geysta
Arbacada, February 16, 2011 Arbacada, February 16, 2011 Chris Bross
Macno malahan inta intee le'eg ee waxbarashada bilowga ah ee aad gelisay hawlgelinta cusub, Suuqgeynta Suuqgeynta Mashiinka Raadinta ayaa soo muuqan doonta markii aanad filayn. Waxaan aqoonsaday liis gaagaaban oo Villa-yada ah oo aan, at EverFffect, waxaad moodaa inay la kulmayaan markay ku hawlan yihiin rajo cusub.
Ma la xidhiidhi kartaa mid ka mid ah kuwan?
Yoolal La'aan - Ha Sheegin Inta Aad Doonayso Inaad Bixiso, Ii Sheeg Inta Aad Doonayso inaad Sameyso
Kulan kasta oo rajo cusub ah waxaan ku weydiinaa su'aasha ah, "Maxay yihiin yoolalkaaga ganacsi?". Oo ku dhowaad mar kasta oo jawaabtu tahay "wadista taraafikada badan" ama "ku sarreynta ereyada gaarka ah ee muhiimka ah". Saaxiibkaaga Suuqgeynta Suuqgeynta wuxuu u baahan yahay inuu fahmo waxa ka dhigaya ganacsigaaga inuu socdo. Kadibna waxaan bartilmaameedsan karnaa ereyada muhiimka ah ee saxda ah ee ku wadi doona taraafikada tayada badan boggaaga. Ka gaabinta inaad isku toosiso ganacsigaaga iyo raadinta yoolalka suuqgeynta waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee keena guuldarada suuqgeynta internetka.
Kheyraad La'aan & Balanqaad - Kheyraad La'aan Ayaa Dhibtay Dad Badan
Shaki la'aan waxaad u baahan doontaa ilo si aad u gaarto yoolalka suuqgeynta mashiinka raadinta. Shirley Tan ayaa qoraal weyn ku qoray SearchEngineLand usbuucii hore xaqiiqda. Ganacsiyadu si buuxda uma fahmaan in si loo gaaro guul ay u baahan tahay ilaha aadanaha iyo u heellan dhaqaale. Ku wadista taraafikada Webka ee bartaada internetka way ka fog tahay bilaash. Waxaa jira shirkado aad u yar oo haysta agab ku filan bilowga si ay u gaaraan himilooyinkooda ay rabaan.
Dulqaad la’aan & Diirad saarid - Midkoodna wixii aad horey uqabsatay midkoodna kuma xirmi doono uguyaraan hadaadan si hagar la’aan ah u daba galin guusha
Aad ayey u yartahay in ololaha suuqgeynta raadinta uu shaqeeyo hal ama laba bilood kadib. Waxaa jira sabab La-taliyayaal Suuqgeyn Sahlinta ay rabaan ganacsiyada inay saxiixaan qandaraas 6 ama 12 bilood ah. Si loo gaaro himilooyinka ganacsi ee la doonayo waqti ayey qaadataa. Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO) maahan mid la qabtay. SEO waa geedi socod socda oo ku habboon goobta iyo ka baxsan goobta. Bixi Halkii Guji (PPC) lama dejin oo waa la ilaaway. PPC waa geeddi-socod sifeyn ah oo soconaya si loo helo boogta ugu badan ee dushaada.
Feejignaan la’aan & Fulin - Sheydaanku wuxuu ku jiraa faahfaahinta
Ganacsigaaga iyo istiraatiijiyadda suuqgeynta ee internetka waxay noqon kartaa cillad la'aan, laakiin feejignaan la'aan iyo fulin la'aan ayaa caddeyn kara istiraatiijiyadda ugu wanaagsan ee khaldan. Feejignaan la'aan iyo fulin la'aanta hagaajinta waxay badanaa horseedaa fursado lumay si loo kordhiyo ROI. SEO kaliya maahan dhisida iskuxirka, inaad fiiro gaar ah u yeelatid goobtaada waxay si aad ah u kordhin kartaa darajada. Bogagga degitaanku waa fure u beddelashada taraafikada PPC. PPC maaha mid hoos u dhigaya Qiimahaaga Hal Guji, ee waxay ku saabsan tahay hoos u dhigistaada Kharashka Beddelka.
Tags: amazon s3suuqyadaCabir CPmyrepono
Oh Uh… Google Kaliya Waxay Bilaabaysaa Warshadaha Badaha
Feb 18, 2011 markay ahayd 5:23 PM
Waan aqriyi doonaa qoraal kasta oo baloog ah oo sawir leh Xafiiska Space. Sikastaba, waxaad sooqaadanaysaa qodobo wanaagsan. Aad ayey muhiim ugu tahay macaamiisha inay fahmaan si ka duwan xeeladaha kale ee suuqgeynta, waxay badanaa qaadataa waqti khadka tooska ah si loo dhiso astaantaada iyo joogitaanka makiinadaha raadinta. Sabirku waa lama huraan.
Feb 18, 2011 markay ahayd 9:26 PM
Lumbergh waa jilaa filim caadi ah!
Runta ayaad kahadashaa ence Sabirku waa mid daruuri u ah kaqeyb galka suuqgeynta internetka.
Feb 19, 2011 markay ahayd 10:57 PM
"Aad ayey u yartahay in ololaha suuqgeynta raadinta uu shaqeeyo hal ama labo bilood kadib".
Marka waa maxay sababta ay xayeysiin ugu tahay bidixda qoraalkan - seddex jibaaraan taraafikada boggaaga 48 saacadood?
Naqshadeynta Webka Toronto
Adoo u adeegsanaya PPC inay tahay hubka suuqgeynta internetka, goobta ganacsiga uma baahna inay wax isbeddel ah ku dhacdo si ay u bixiso qiimeynta mashiinka raadinta sare.